Koorsooyinka - Machadka Waxbarashada Laba-luqadlaha
Bogga ugu weyn Ingiriisiga loogu talagalay Qaxootiga, Asleyr, SIV, iyo Dhibanayaasha Ka ganacsiga dadkaKoorsooyinka
Koorsooyinka Tababarka Luuqadda Ingiriiska
Ingiriisi Luqad Labaad
Fasalada ESL waxay diiradda saaraan xirfadaha noolaanshaha. Casharradeenu waxay baraan xirfadaha luqadda aasaasiga ah ee hadalka, dhageysiga, akhriska iyo qorista. Waxaan haynaa fasalo Ingiriis ah oo heerarkoo dhan laga bilaabo bilow ilaa bilowga.
Koorsadani waxaa loogu talagalay ardayda wax baranaya ee aqoon yar u leh ama aan aqoon Ingiriisiga. Ardayda waxay baran doonaan alifbeetada, aqoonsiga tirada, ereyada aragga, iyo codadka.
Ardayda leh jadwallo aan caadi ahayn ama kuwa durugsan ku nool, BeI waxay leedahay fasalo iskood u shaqeysa oo internetka ah oo loogu talagalay ardayda inay ku bartaan Ingiriisiga meel kasta iyo waqti kasta. Fasalada waxaa lagu bixiyaa iskaashiga aan la leenahay Burlington English.
Fasalada Ingiriisiga ah ee lagu baro habka 'Hybrid' 'waxay ku bixiyaan tilmaam labadaba xiisadaha khadka tooska ah iyo kan fool ka foolka ah. Koorsadani waxay u fiican tahay ardayda doorbidaya waxbarida iskood u shaqeysta iyo ku tababbarta macalinka iyo ardayda kale.
Umeerin koox yar
Koorsadani waxay ku habboon tahay kooxaha yar yar ee leh ujeeddooyin barashada luqadda oo isku mid ah oo u baahan inay ka shaqeeyaan yoolalka gaarka ah ee luqadda.
Fasallo Hal-iyo-hal ah
BeI waxay bixisaa tilmaamo gaar ah ardayga leh awoodaha xaddidan oo adkayn kara inay kaqeybgalaan fasalka kooxeed. Awoodda xaddidan waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn aragga hoose, aragga oo liita, iyo arrimaha dhaqdhaqaaqa.
Koorsooyinka ujeedooyinka gaarka ah
Xirfadaha Nolosha Ingiriisiga
Koorsooyinkaani waxay dadka qaxootiga ah ee dhowaan yimid u barayaan howlaha bulshada Mareykanka. Ardaydu waxay baran doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankayaga iyo Ingiriisiga looga baahan yahay inay guuleystaan. Mawduucyada koorsada caanka ah waxaa ka mid ah Literacy Literacy, Literacy health Literacy, iyo Fahmitaanka nidaamka waxbarasho ee Mareykanka.
Koorsooyinkan waxay bixiyaan xirfadaha Ingiriisiga ee warshadaha shaqada gaarka ah. Ardayda koorsooyinkaan laga yaabaa inay leeyihiin waayo-aragnimo hore ee maadooyinkaas ama laga yaabaa inay xiiseynayaan inay galaan goobta shaqada. Mawduucyada koorsooyinka caanka ah waxaa ka mid ah Ingiriisiga Caafimaadka, Ingiriisiga loogu talagalay Teknolojiyada Macluumaadka, iyo Ingiriisiga loogu talagalay Xirfadlayaasha Maamulka.
Koorsadan waxaa loo habeeyay loo shaqeeyeyaasha kuwaas oo tiro badan oo qaxooti ah loo shaqeeyey. Fasalladu badanaa waxay joogaan goobta shaqada waxayna isku daraan jiritaanka xirfadaha Ingiriisiga aasaasiga ah iyo ereyada gaarka ah ee la xiriira weedho iyo weedho.
Ingiriisiga Gaarka ah - Gaarka ah
Baahida gaarka ah ee bulshada qaxootiga ee Houston waxay go'aamin kartaa in fasalada Ingiriisiga ee ujeedooyin gaar ah loo baahan yahay si kor loogu qaado kalsoonida iyo isku filnaanshaha meelaha ay ka midka yihiin Wadahadalka, Qorista, Iwm